အကောင်းဆုံး GABA အမှုန့် (၅၆-၁၂-၂) ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ
မေလ 19, 2021
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Gamma-aminobutyric acid (GABA) အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှု ၂၆၀ ကီလိုဂရမ်ရှိပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
အမည်: gamma-aminobutyric acid (GABA)
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 103.120 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 203.7 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်: 4-aminobutanoic အက်ဆစ်
နာမ်: 4-Aminobutanoic အက်ဆစ်
InChI Key ကို: BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
ပျော်ဝင်: ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော (130 g / 100 mL)
လျှောက်လွှာ: GABA သည်အချို့သော ဦး နှောက်အချက်ပြမှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်း (သို့) တားဆီးခြင်းနှင့်သင်၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်၎င်းကို inhibitory neurotransmitter ဟုသတ်မှတ်သည်။
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အဖြူ microcrystalline အမှုန့်
gamma-aminobutyric acid (GABA) (၅၆-၁၂-၂) NMR Spectrum
Gamma-aminobutyric acid ဆိုတာဘာလဲ။
Gamma aminobutyric acid (GABA) သည်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင် neurotransmitter အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောသဘာဝအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ Neurotransmitters များသည်ဓာတုလက်နက်များအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ GABA သည်အချို့သော ဦး နှောက်အချက်ပြမှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်း (သို့) တားဆီးခြင်းနှင့်သင်၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်၎င်းကို inhibitory neurotransmitter ဟုသတ်မှတ်သည်။
Gamma-aminobutyric acid (GABA) အမှုန့်သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကြွက်သားလေသံ၊ ပင်စည်ဆဲလ်များကြီးထွားမှု၊ ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များကိုထိန်းချုပ်သော endogenous neurotransmitter ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်း GABA သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ neurotransmitter အဖြစ်ဆောင်ရွက်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင် inhibitory function တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသည်။ GABA သည်အန္တရာယ်ပြုခြင်း၊ သွေးကြောကျဆင်းခြင်းနှင့်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသသည်။ ၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ role သည်အာရုံကြောစနစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချစေသည်။ GABA ကိုအစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်ရောင်းချသည်။
ဂါဘာ (56-12-2) အကျိုးခံစားခွင့်
လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုထားသောအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာအထူးကု Ph.D. မိုက်ကယ်ဂျေဘရုစ်က“ GABA သည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုတစ်ညလုံးအိပ်ပျော်စေပြီးအိပ်စက်အနားယူစေနိုင်သည်။ GABA-A receptors များသည် thalamus၊ အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည့် ဦး နှောက်ဒေသတွင်လည်းအလွန်အမင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းခံရသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအိပ်မပျော်သည့်လူနာများသည် GABA အဆင့်သည်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါမရှိသောလူများထက် ၃၀% နီးပါးနိမ့်ကျသည်။
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ၁၀၀ မီလီဂရမ်သဘာဝပုံစံ GABA (PharmaGABA) ကိုအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်အိပ်မောကျလျင်မြန်စွာအိပ်ပျော်သွားပြီးတစ်ပတ်ထပ်ဖြည့်ပြီးလျှင်အိပ်ပျော်သွားသည်။
“ သင့်ခန္ဓာကိုယ် [GABA] ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမင်းရဲ့ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ကနှေးကွေးပြီးလူတစ်ယောက်ကိုပိုပြီးစိတ်သက်သာရာရစေပြီးများသောအားဖြင့်အိပ်ချင်နေတတ်တယ်။ တကယ်တော့လက်ရှိအိပ်စက်ခြင်းအထောက်အကူအများစုဟာ ဦး နှောက်ထဲမှာပုံမှန် GABA အဆင့်ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်။
ထို့အပြင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို GABA agonist (ဆိုလိုသည်မှာ GABA receptors များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ GABA ကဲ့သို့တူညီသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည့် GABA ကဲ့သို့တူညီသောအရာ) သည်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုပြသသည်။
glutamine ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဟန်ချက်ညီစေရန် GABA ၏အခန်းကဏ္ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်လည်းအထောက်အကူပြုသည် (စိုးရိမ်စိတ်ကိုကာကွယ်ရန်ဆေးများစွာသည် GABA-A receptors များကိုပစ်မှတ်ထားသည်) ။ လေ့လာမှုများစွာက GABA အဆင့်များသည်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမည်မျှလုံလောက်သည်ကိုဖော်ပြသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရသုတေသီများသည်ပါ ၀ င်သူများသည်ရေစက်ရေ၊ L-theanine (လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောဒြပ်ပေါင်းများ) နှင့်ရေဖြည့်ရေသို့မဟုတ်သဘာဝအလျောက် GABA (PharmaGABA) ဖြင့်ရေဖြည့်သည်ဖြစ်စေပါ ၀ င်သည်။ မိနစ်ခြောက်ဆယ်ခန့်အကြာတွင်သူတို့၏ ဦး နှောက်လှိုင်းများကို electroencephalogram (EEG) စမ်းသပ်မှုဖြင့်တိုင်းတာ။ GABA သည် L နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပါဝင်သူများ၏ alpha brainwaves (များသောအားဖြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်) နှင့် beta brainwaves (ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများတွင်တွေ့ရသော) လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် -Theanine သို့မဟုတ်ရေ။
အလားတူသုတေသီများကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်အမြင့်ကိုကြောက်ရွံ့သောပါဝင်သူများသည်ချောက်ကြီးပေါ်တွင်ရပ်ဆိုင်းထားသည့်တံတားကို ဖြတ်၍ မလမ်းလျှောက်မီ Plbo သို့မဟုတ် 200 mg GABA (PharmaGABA ပုံစံ) ကိုရရှိခဲ့သည်။ ပလီကေးရှင်း immunoglobulin-A (sIgA) ၏မြင့်မားသောအဆင့်များ၌အပန်းဖြေမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတံတွေးအဆင့်များကိုအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်တိုင်းတာခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရရလဒ်များအရ parbo အုပ်စုသည် sIgA တွင်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး GABA အုပ်စု၏အဆင့်များသည်တည်ငြိမ်နေပြီးအဆုံးတွင်အနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
သုတေသနပြုချက်အရ GABA သည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုသိသိသာသာအာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုသက်သာစေနိုင်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်သည်။
သေးငယ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ပါဝင်သူများ (များသောအားဖြင့်နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု) သည် GABA ၀ ၀၊ ၂၅၊ ၅၀ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သည့်အဖျော်ယမကာကိုပေးခဲ့ပြီးခက်ခဲသောသင်္ချာဆိုင်ရာပြproblemနာကိုလုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သုတေသီများက GABA အုပ်စုနှစ်ခုသည် cortisol အပါအ ၀ င် biomarkers အချို့လျှော့ချခြင်းဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ - စွမ်းရည်ကိုဖြေရှင်းခြင်း။
ကြိုတင်သုတေသနပြုချက်အရ GABA သည်အနည်းဆုံးဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုအရကျန်းမာသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ GABA သည်သွေးကြောများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာတိုးချဲ့နိုင်အောင်ကူညီခြင်းဖြင့်ကျန်းမာသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
ကျန်းမာသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုထောက်ပံ့ရန် GABA သည်မည်မျှထိရောက်မည်ကိုနားလည်ရန်ပိုမိုခိုင်မာသောသုတေသနလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအစောပိုင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအရ GABA ၈၀ မီလီဂရမ်နှင့်နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်သွေးပေါင်ချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
Gamma-aminobutyric အက်ဆစ် အသုံးပြုမှု?
GABA ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော Gamma-aminobutyric acid သည်အမိုင်နိုအက်စစ်နှင့် neurotransmitter ဖြစ်ပြီးဆဲလ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့သတင်းအချက်အလက်များကိုသယ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသောဓာတုဗေဒအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
GABA သည်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဖြည့်စွက်ပုံစံဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများက GABA ဖြည့်စွက်ဆေးများသည် ဦး နှောက်၏ GABA အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အမှန်မှာအချို့ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သူများက GABA ကို“ သဘာဝပုံစံ Valium” ဟုခေါ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေပြီးအပန်းဖြေမှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်။
သုတေသနပြုချက်အရ GABA သည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှကာကွယ်ရန်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဇီဝဓာတုဗေဒဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရအဓိကစိတ်ကျဝေဒနာသည်များသည် GABA အဆင့်နိမ့်ကျနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုအရ GABA အဆင့်တိုးခြင်းသည်အခြေအနေကိုကြောက်ရွံ့မှုအတွက်ကုသရာတွင်အသုံးဝင်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤရလဒ်သည် GABA သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိအေးဆေးတည်ငြိမ်သော neurotransmitter ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
GABA သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုသက်သာစေရန်၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရန်၊ premenstrual syndrome (PMS) ၏လက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု - hyperactivity disorder (ADHD) ကိုကုသရန်ပါးစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
GABA ဖြည့်စွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့်၊ သင်ဖြည့်စွက်ရန်ရွေးချယ်ပါကအကြံပြုထားသည့်ဆေးပမာဏမရှိပါ။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် GABA ဖြည့်စွက်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၀၀ mL လျှင် ၁၀ ဂရမ်မှ ၁၀ ဂရမ်မှ ၁၂ ဂရမ်ပါ ၀ င်သည့်နို့ရည် ၁၀၀ mL ကိုသွေးဖိအားမြင့်မားသောလူနာများကနေ့စဉ် ၁၂ ရက်ပတ်လုံးနံနက်စာစားချိန်တွင်သောက်သုံးကြသည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် GABA ၂၀ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်သော chlorella ဖြည့်စွက်ချက်ကို ၁၂ ပတ်ကြာနေ့စဉ် ၂ ကြိမ်သောက်ခဲ့သည်။
ဂါဘမြို့သား အမှုန့် ရောင်းမည်(GABA အမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် GABA အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသေချာစေရန်တင်းကြပ်ပြီးလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
 ဟေးဝီလျံအမ်, ed ။ (2016) ။ ဓာတုဗေဒနှင့်ရူပဗေဒ၏စီအာစီလက်စွဲစာအုပ် (၉၇ ကြိမ်မြောက်) ။ စီအာစီစာနယ်ဇင်း။ စစ။ 97-5 ။ ISBN 88-978
 WG ဗန် der Kloot; ဂျေရော်ဘင် (1959) ။ "GABA နှင့် picrotoxin တို့၏ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းနှင့် crayfish ကြွက်သားများကျုံ့ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများ" အတွေ့အကြုံ။ ၁၅:၃၆ ။
 Roth RJ, Cooper JR, Bloom FE (2003) ။ Neuropharmacology ၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးအခြေခံ။ အောက်စ်ဖို့ဒ် စ။ 106. ISBN 978-0-19-514008-8 ။
Citicoline ဆိုဒီယမ် (33818-15-4)